ITIL Vs PMP Asambodo? Kedu nke ziri ezi maka gị? - Ụlọ akwụkwọ nkà na ITS
ITIL Vs PMP Asambodo
Ma PMP Certification (Project Management Professional) na ITIL Certiification (Ụlọ Ọrụ Ịzụ Ihe Ọmụma Ihe ọmụma) bụ nhọrọ ndị na-ewu ewu. Asambodo ọ bụla nwere ike ịdakwasị gị ọrụ kachasị elu na ụgwọ dị elu.
Kedu ka anyi si amalite site n'ikike akwukwo PMP. Mgbe ịmalite ịmalite ọrụ ahụ na-abanye na stool, ọ na-ewe oké nkwenye na mmesi obi ike.
Dị ka o nwere ike, ịmalite ije n'ụzọ ziri ezi ga-enyere aka n'ihu ngwa ngwa, ị nwere ike ịlele nke a mgbe akwụkwọ ikikere PMP ghọrọ ihe dị mkpa ma mee ka ihe dị ntakịrị karịa ka ị na-eche n'echiche ọ bụla. A N'ezie na PMP na-eme ka atụmatụ nlekọta oru ngo gị na-eme ka i nwee ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ikike dị mma karị maka ilekọta nchịkwa dị nta na ilekọta ọrụ. Nyochaa uru kachasị mma nke ị nweta onwe gị na akwụkwọ ikikere PMP.
Ọganihu Na-enweghị Atụ na Ọrụ Gị
Usoro ntinye akwụkwọ PMP bụ ọrụ a kwadoro nke ụwa na ndị mmadụ niile na-aghọta ya. N'akụkụ IT, ọtụtụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-eche nche maka ndị PMP na-elekọta ndị nlekọta na nke a nwere ike ịme ka ọrụ gị dị elu karịa nke ị hụrụ.
O doro anya na onye ọ bụla nọ na ụlọ ọrụ ụwa maara uru nke nchịkọta usoro na otú ọ si emelite uru ọ na-arụ ọrụ. Mgbe ị gbanwere ọkachamara PMP kwadoro ọkachamara, ị nwere ike ijikọta ndị mmadụ na-eme njem ahụ na ndị a kwadoro na nkwenye PMP. Nke a na-akwalite mgbasa ozi gị na ika na-arụ ọrụ dịka onye ọkachamara mgbe ị na-enye gị ohere ịnweta ọwa kachasị elu na nhọrọ ọrụ ndị ọzọ.
Mmelite na ọkwa elu
Ọ bụghị dị mfe dị ka ọ na-adọrọ ka ịchọta ikike na maka otu ihe ahụ ị ga-enweta nke ọma ịkwadebe. E nwekwara otu ọrụ nke metụtara usoro ọrụ ahụ. Ị na-enweta ohere ịkwadebe na ịmalite ịmụba na multi-pronged njikwa ọrụ kpuchie. Nkewa nke usoro a gunyere
N'ihi nke a, ị ga-enwetakwa ohere ịnweta ọkwa nke usoro nhazi oru ngo nke nwere ike na-emeghị ihe ọ bụla na arụ ọrụ gị kwa ụbọchị iji kwalite mmegbu na mmebi iwu.
Ị ga-enwe ike ịchọta mkpakọrịta kachasị elu na ọkwa zuru ụwa ọnụ nke na-arụ ọrụ na ngalaba dị iche iche, nke a bụ n'ihi ọgbụgba ahụ ga-eme ka ọkachamara gị dịkwuo elu ma mee ka ndị na-ahụ maka ịhazi ọrụ nhazi gị kwadoro. N'otu aka ahụ, ị ​​ga - ejikọta ndị mmadụ n'otu akụkụ nke ọmụmụ ihe ndị a, ị nwere ike ịṅa ntị na nkwurịta okwu, na nnọkọ na-enyere ha aka inweta ozi site na nka.
Ogologo iji nweta ego bara uru
N'ụzọ doro anya, ọ pụtara na akwụkwọ ikikere PMP ga-enye gị ohere ịghọ onye nduzi ihe ka elu karịa ndị nke a na-ejighị n'aka. Mgbe ị ga-enweta akararịrị, ị ga-amalite ịhụ ịrị elu na ụgwọ ọzọ.
Ngwá Ọrụ Nlekọta Nlekọta Ụlọ Ọrụ nke Ụlọọrụ
A na-enye nke a mgbe nile mgbe ị na-ejikọta akwụkwọ ikikere PMP. Onye oru nhazi oru ngo kwesiri ichikota otutu ihe di iche iche ma jiri otutu uzo di iche iche na oru oru ngo na akwukwo nke PMP ka enyere ya aka ka enwere ike imezi ihe n'ile ihe ndi ozo.
K'anyị ghota na site na njirimara nke data, a na-atụ anya ka achụmnta ego ọ bụla dozie mmepe ọganihu. Enweela nsogbu dị iche iche dị ka Management maka ndị ọkachamara IT. Iji nagide nsogbu ndị dị otú ahụ, ndị okenye ụlọ ọrụ ITIL ma ọ bụ IT gọọmentị amalitela ịkwado ọnọdụ dị mma na azụmahịa. A na - ekepụ ITIL na ntọala ITIL, ITIL n'etiti na ọkwa ọkachamara ITIL.
Ihe mmasị nke asambodo ahụ bụ bounty. Ọ bụrụ na onyeisi nwere ihe ọmụma ITIL, ọ ga-abụrịrị na ọ na-esonyere otu nzukọ ebe ọ nwere ike ịlele njedebe ọrụ ma tinyekwuo njikwa njikwa data n'ụzọ ndị na-enweghị ike ịghọta ihe ọzọ. Asambodo ahụ ga-emezigharị anya ya dị ka onye ọkachamara, onye nchịkwa ma ọ bụ ndị ọkachamara IT.
Ọ bụrụ na ị kwadoro na asambodo ahụ, ị ​​gosipụtara ọrụ dị elu dị ka onye ọ bụla iji nọrọ n'ihu ndị ọzọ na ngalaba IT. Nke a na - emetụta gị iji nweta ihe onwunwe kwesịrị mma. Na njedebe nke akwụkwọ ITIL, ndị ọchịchị nwere ọchịchọ nke ịkụziri gị ihe, ọkachamara na ịrụ ọrụ nke ọma na ịkwaga ịkwado usoro ịkwadoro ùgwù na ọkachamara IT. Site na asambodo ITIL, ị na-amalite ikwu okwu na ụdị ndị ọkachamara ahụ na gburugburu ebe a, ị na-amalite ịbanye na weebụ nke usoro ihe ndị ọzọ na ihe ndị ọzọ dịka ike IT.
Ndị nchịkwa nyere akwụkwọ ikikere IT na ozi ga-aga n'ihu iji kwupụta ihe dị ịrịba ama karịa otu nzukọ ọ bụla ebe ọ bụ na ha nwere ike ịlele nyocha niile n'ime ya. Ime ihe dị otú ahụ, ebe ị na-enwe ike ịlele oge mmeghachi omume na akwụkwọ ozi n'ime ụlọ ọrụ na ndị ahịa, bụ enyemaka nke ITIL na-enyere gị aka. Naanị inwe ezi uche, ị ghaghị ịkọwa na akwụkwọ ITIL bụ nke na-adịghị ike nsị imeghe karịa akwụkwọ ikike PMP. Nke ikpeazụ bụ nke a ma ama nke na ọ na-eme ndokwa dị ukwuu nke ịrụsi ọrụ ike na ịkwadebe nke ọma na njedebe gị.
N'ọnọdụ ọ bụla, n'ezie, asambodo ị ghota bụ ihe a ga-arụ na ọ ga-adabere na ịdabere na ihe ị na-ele anya na ọrụ ọrụ IT gị. Nke a dabere na ihe kpatara ya bụ na onye ọ bụla na-ekewapụ iche ma weghachite ebumnuche ya.
Ị nwere ike ịchọta ọpụpụ: -Akara Akara Ọrụ Ohere
Ị ga-achọpụta ma chọpụta otú onye ọ bụla n'ime ha ga-esi mee ka ị nwee ike ịrụ ọrụ na ịzụlite ọrụ ugbu a na ugboro ugboro. Ocarreer ohere na ohere ị chọrọ otu asambodo nke na-eme ka ị gosipụta ozi na nhazi oru ngo kwesịrị ekwesị ị nwere ike na-enweghị ihe ọ bụla na-aga maka PMP.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na ị na-eche nche maka echiche doro anya gbasara Management Management dabeere na IT, ị nwere ike ịga ITIL, kama PMP. Asambodo abụọ ahụ enweghi ike ịmepụta isi na nhazi nke isi n'ihi na ha nwere ebumnuche ụfọdụ na ọrụ iche iche na-arụ ọrụ. Ọ dabere na gị dịka ọkachamara IT na dịka onye, ​​iji dozie mkpebi ndị gụrụ akwụkwọ.